Fihoaram-pefy : Mpitsara iray noroahina tamin’ny asany -
AccueilSongandinaFihoaram-pefy : Mpitsara iray noroahina tamin’ny asany
Fihoaram-pefy : Mpitsara iray noroahina tamin’ny asany
30/06/2017 admintriatra Songandina 0
Navoakan’ny minisitry ny Fitsarana Charles Andriamiseza am-pahibemaso, omaly, nandritra ny famaliana ny fanontaniana nivantana avy tamin’ireo loholon’i Madagasikara, tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona Anosy, ny fisian’ny mpitsara iray nihoa-pefy ka voatery noroahina. Misy rafitra iray ato anatin’ny Fitsarana, hoy izy, manara-maso sy mandray ny fitarainana momba ny mpitsara manao hadisoana. Nandritra ny fihaonambe ara-potoan’ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara ny 15 sy ny 16 jona teo no nivoahan’ilay fanapahan-kevitra. « Efa niakatra filankevi-pifehezana tamin’ny volana septambra teo io mpitsara io. Nahazo fahafahana madiodio izy tamin’izany. Iray volana taorian’io anefa, dia mbola namerin-keloka indray izy. Ny mpitsara rehetra teo anivon’ny Csm dia nangataka ny fandroahana azy mihitsy. Mety mandeha hatrany amin’ny ady heloka ny fanenjehana an’ilay mpitsara nahavita hadisoana teo am-panatanterahana ny asany. Tahaka an’io mpitsara voaroaka teo anivon’ny Csm io izao, dia mandeha any amin’ny Fitsarana ny raharaha mahakasika azy », hoy ny minisitry ny Fitsarana Charles Andriamiseza.
Maromaro ny mpitsara niatrika ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara noho ny fihoaram-pefy nataony teo am-panatanterahana ny asany. Afaka madiodio izy ireo taorian’ny fanapahan-kevitry ny Csm afa-tsy ilay iray voalaza etsy ambony. Miainga avy amin’ny fitarainan’ny olon-tsotra no iaingan’ny Csm manatanteraka ny fanadihadiana amin’ilay mpitsara. Aorian’ny fanadihadiana dia fantatra raha tena mitombina tokoa ilay antony hanenjehana an’ilay Mpitsara na tsia. Misy amin’ireny fitarainana hataon’olona ireny mantsy no torapo fotsiny, noho ny tsy fahaizany lalàna.
Ny filohan’ny Repoblika no filohan’ny Csm. Tsy manatrika an’izany fihaonambe ara-potoana izany anefa izy fa ny minisitry ny Fitsarana izay mpikambana ao anatiny ihany koa no misolo tena azy. Mikatsaka ny fanatsarana ny asan’ny Fitsarana no antom-pisian’ity rafitra ity. Mijoro ho mpanitsy ireo mpitsara manao hadisoana ihany koa anefa izy.
Plage Ramena : Nifandrombahana ny nanao « selfie » tamin’ny Filoha
Nifarana omaly tany Antsiranana, tao amin’ny kianja filalaovam-baolina tamin’ny alalan’ny fotoam-bavaka lehibe ny fanokafana ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM sy ny faha-200 taonan’ny nahatongavan’ireo misioneran’ny LMS na ...Tohiny
Rivo Rakotovao : Izay mahafeno fepetra no aoka hilatsaka